Kolombia: Noafahan’ny FARC Ireo Miaramila Takalonaina 10 ‘Farany’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Avrily 2012 6:06 GMT
Tamin'ny Alatsinainy 2 Aprily 2012, miaramila efatra sy polisy enina nalain'ny Tafika Revolisionera ao Kolombia (FARC) an-keriny tamin'ny taona 1998 na 1999, no noafahan‘ireo vondrona mpioko mitam-piadiana ireo ihany tao amin'ny faritra ambanivohitra eo anelanelan'i Meta sy Guaviare (atsimo-atsinanan'i Kolombia). Nambaran'ny FARC ny fanafahana ireo takalonaina enina tamin'ny taon-dasa, ary tamin'ny volana Febroary, nanambara ny vondrona fa hiala amin'ny fakàna an-keriny izy ireo ary hoahafahany ireo takalonaina ambiny.
Diana Lara (@LaCura_) ni-tweet hoe:
Mario Cabrera (@amarilloazulado) kosa nankalaza ny fanafahana ireo takalonaina tao anatin'ny fahamalinana:
Angela Ospina (@aodenicholls) nampahatsiahy ireo mpanaraka azy ao amin'ny Twitter fa mbola misy olo-tsotra tazonin'ny FARC:
José Carlos García R (@JoseCarlosTecno) nanoratra hoe:
Ny sasany nivazivazy, tahaka an'i El Chiflamicas (@elchiflamicas):
The Walking Dead! RT @Hora20: Androany ao amin'ny H20 (fandaharana fanehoan-kevitra isan-kariva ao amin'ny radio): olona nalaina an-keriny 10 no tafaverina ho amin'ny fiainana…
Tsy ny mpisiokantserasera rehetra no nankalaza ny famoahana ireo takalonaina. Ramiro Castañeda (@ramiroski_) ni-tweet:
Daniel Arango (@stultaviro) nahatsiaro ilay takalonaina teo aloha Ingrid Betancourt izay nikasa hitory ny fanjakana:
Tsara fa noafahana ireo nalaina ankeriny. Rahampitso, hitory ny fanjakana izy ireo ary isika rehetra no hizaka izany.
Julieth Beltrán (@JuliethBlues) nahatsiaro fanafahana olona hafa:
Tsy ho adinoko mandrakizay fa tamin'ny nanafahana an'i Moncayo, maro ireo olona nilaza fa toy ny mpikambana ao amin'ny mpioko mitam-piadiana izy. Lasa lavitra tokoa izy ireo amin'izany…
Nandritra izany, Andrea Salazar (@MssSookie) nilaza ny heviny mikasika ity fanafahana ity sy ny fangalana ankeriny amin'ny ankapobeny:
Juliana Fitzgerald (@Julianitra naneho hevitra misy esoeso tamin'ity fanafahana ity:
Tahaka izany ihany koa, Luis G. Forero (@LuisGForero) nanamarika hoe:
Diego Pava (@salentoq) nanao fanoharana ny amin'i William Domínguez, takalonain'ny FARC teo aloha noahafana tamin'ny taona 2009 ary nisy namono nandritra ny fifanjevona tanaty trano fisotroan-toaka tamin'ny volana Septambra 2011:
Yoyoma Carrillo (@medio_evo) ni-tweet:
Colombia en ruinas (@PaisEnRuinas) nilaza ny amin'ny andraikitry ny tafika:
Farany, Camilo Martínez N. (@CamiloMartinezN) nanambara hoe: